Maninona no mifidy anay - Hebei Shaoman International Trade Co., Ltd.
1. Serivisy tokana
Ny tombony lehibe azonay indrindra dia ny fampidirana loharanon-karena. Izahay ary manome anao vokatra maro karazana ary mahafeno ny fepetra takinao amin'ny sokajy vokatra.
Baiko farany ambany 2.Flexible
Kely ny MOQ. Afaka manao habetsahan'ny antonony tsara ho an'ireo mpivarotra sy mpaninjara izahay mba hampitomboana ny fahombiazan'ny fampiasana ny volanao.
3. antoka aorian'ny fivarotana
Hanome ny zava-drehetra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay, ao anatin'izany ny torolàlana momba ny vokatra, ny fanoloana ary ny fiverenana ... sns. Tsy mila manao na inona na inona ny mpanjifa.
Mivarotra kilalao fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny Internet mandritra ny 1 taona izahay. Ary mifantoka amin'ny safidin'ny vokatra mafana indrindra sy ny fifehezana kalitao izahay. Ary izahay manome ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay tsirairay amin'ny ezaka rehetra.
15 taona traikefa nizarana offline.
Misy injeniera 10 ao amin'ny ekipa R&D, izay afaka mamaly ny fitadiavanao fanaingoana.
Tompon'andraikitra 100% amin'ny kalitaon'ny vokatra izahay.
Valiny haingana 24 ora
Avelao izao tontolo izao tsy hanana fitiavana mafy
Shaoman dia manome vahaolana tokana amin'ny fivarotana kilalao ara-nofo.
Izahay dia orinasa manavao izay manokana amin'ny famolavolana, fampandrosoana, famokarana ary marketing amin'ny kilalao ara-nofo. Mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny ISO & RoHS izahay, ary manaraka ny foto-pamokarana Eco-friendly sy Non-poizina, tia hoditra, ny vokatra rehetra dia nandalo ny fitsapana ny CE sy FDA.
"SHAOMAN" dia marika China noforonin'ny tenany.